Laacibka Maxamed Saalax oo Bartiisa Twitter-ka ku xaqiijiyey inuu ka qeyb geli doono Koobka Adduunka – Radio Dalsan FM 91.5 MHz | Warar Sugan | Somalia News
Laacibka Maxamed Saalax oo Bartiisa Twitter-ka ku xaqiijiyey inuu ka qeyb geli doono Koobka Adduunka
Laacibka dhaawacan ee Kooxda Liverpool FC, Maxamed Saalax ayaa sheegay inuu isgau hubo inuu ka soo muuqan doona Xulka K/cagta Masar ee ka qeyb galaysa Tartanka K/cagta ee Adduunka ee bisha June lagu qaban doono dalka Raashiya.
Qoraal uu soo dhigay Bartiisa Twitter-ka ayuuna ku sheegay arrintaasi, kadib, markii uu Garabka kaga dhaawacmay Ciyaartii Finalka ee ay Kooxdiisa la yeelatay Kooxda Real Madrid, taasi oo ay Real Madrid ku guuleysatay 3-1
Kaacibka ayaa ku dhaawacmay qeybtii koowaad ee Ciyaartaasi, kadib, markii uu Kabtanka Real Madrid, Sergei Ramos kala kulmay hagardaamo.
Laacibka Maxamed Salaax waaxa uu Twitter-kiisa ku sheegay inay habeenkaasi ahayd habeen qalalaaso.
“Waxay ahayd habeen aad u rabsho leh, laakiin waxaan ahay Dagaalyahan. Xitaa fursadaha, waxaan ku kalsoonahay inaan tegi doono Raashiya, si aan dhamaantiina idin farax geliyo” ayuu Laacibkaasi soo dhigay Bartiisa Twitter-ka.
Waxa uu intaasi ku daray: “Jacaylkiinna iyo Taageeradda waxay Aniga I siin doontaa Awoodda aan u baahanay”.
Qoraalka uu Maxamed Salaax soo dhigay Twitter-ka waxa uu u qornaa sidatan:
Dhinaca kale, Xulka K/cagta ee Qaranka Masar waxay markii ugu horreysay tan iyo sannadkii 1990-kii ka qeyb geli doonaan Koobka Adduunka, waxayna bisha June 15-da la ciyaari doonaan Xulka dalka Uruguay.
Maraykanka oo ku baaqay in Wasiirka Difaaca ee Koonfurta Suudaan lagu daro Liiska Madow ee QM.
Saldhigga Boliska Degmadda Kaaraan oo la dayactiray.